ချီလီနိုင်ငံသို့ ဆဌမအသုတ် တရုတ်နိုင်ငံ၏ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများ ရောက်ရှိ
ဆန်တီယေဂို၊ မတ် ၂၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ချီလီနိုင်ငံ မြို့တော် ဆန်တီယေဂိုသို့ မတ် ၂၁ ရက်က Sinovac ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ချီလီကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Paris ၊ ချီလီနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး Niu Qingbaoတို့က လေဆိပ်သို့ သွားရောက်၍ ပို့ဆောင်လာသည့် ကာကွယ်ဆေးများကို လက်ခံခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ ဂျော်ဂျီယာ၌ ပစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားရာ ၈ ဦးသေဆုံး
ဝါရှင်တန် ၊ မတ် ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန် နိုင်ငံ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် အတ္တလန်တာမြို့၌ မတ် ၁၆ ရက်တွင် ပစ်ခတ်မှု သုံးခု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ လူ ၈ ဦး သေဆုံးပြီး ၁ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန်-မက္ကဆီကိုနယ်စပ်တွင် နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကြာကာလ တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအများဆုံးအခြေအနေနှင့်ကြုံတွေ့ရ
ဝါရှင်တန်၊ မတ် ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နှင့်မက္ကဆီကိုနယ်စပ် တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ လူဦးရေသည် နှစ်ပေါင်း(၂၀)ကြာကာလတွင် အများဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ အမေရိကန်အနေဖြင့် တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြသည့် အရွယ်ရောက်ပြီးသော တစ်ကိုယ်ရေသမားများနှင့်မိသားစုအများစုကို နယ်နှင်ခဲ့သော်လည်း အဖော်မရှိသည့်ကလေးငယ်များကို နယ်နှင်မှုများလုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ကြောင်း အမေရိကန် အမိမြေလုံခြုံရေးဝန်ကြီး Alejandro Mayorkas၏ မတ် ၁၆ ရက် ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အမေရိကန်နှင့်အီရန်အကြား တစ်ဆင့်ခံသံတမန်ဆက်ဆံရေး ဆောင်ရွက်နေဟု အိမ်ဖြူတော်လုံခြုံရေးအကြံပေးဆို
အမေရိကန်နှင့်အီရန်အကြား တစ်ဆင့်ခံ သံတမန်ဆက်ဆံရေးလုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်လုံခြုံရေး အကြံပေး Jake Sullivanက မတ် ၁၂ တွင် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဝါရှင်တန်ရှိ ရိုက်တာ သတင်းက ယင်းနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံချီကာဂိုမြို့တွင် ဂိုဏ်းအုပ်စုနှင့်ဆက်စပ်၍ အနည်းဆုံးလူ ၁၅ ဦးသေနတ်ပစ်ခံရ ၊ ၂ ဦးသေဆုံး
အမေရိကန်နိုင်ငံ ချီကာဂိုမြို့တောင်ပိုင်းရှိ စီးပွားရေးအဆောက်အအုံတစ်လုံးတွင် တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်ပိုင်းက ပေါ့ပါတီပွဲတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်နေစဉ် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားရာ အနည်းဆုံး လူ ၁၅ ဦး ကျည်ထိမှန်ခဲ့ပြီး ၂ ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုသည် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၄ နာရီ ၄၀ မိနစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး အသက် ၃၁ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာ ဦးခေါင်းတွင် တစ်ချက်အပါအဝင် သုံးချက်တိတိအပစ်ခံထားရသည်ကို အဆောက်အဦအပြင်ဘက်၌ တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း နှင့် အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးမှာ လည်ပင်းနှင့် ခြေထောက်တွင် သေနတ်ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ပြီး ၎င်း၏ရုပ်အလောင်းကို အဆောက်အဦအတွင်းရှိ အခန်းတစ်ခု၌ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းအဆောက်အဦသည် ကားကရိန်းဆွဲဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီရုံးခန်းဖြစ်သော်လည်း pop-up ပါတီပွဲများလက်ခံကျင်းပရာ နေရာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ကြောင်း ချီကာဂိုထရိုင်ဗျုသတင်းက မတ် ၁၄ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ် ၁၄ ရက်က အမေရိကန်နိုင်ငံ ချီကာဂိုမြို့တွင် ပါတီတစ်ခု၌ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် အခင်းဖြစ်စဉ်ကို ရုပ်သံလွှင့်သတင်းဌာနတစ်ခုက ထုတ်လွှင့်ပြသနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
သေနတ်ပစ်ခံရသော လူများမှာ အသက် ၂၀နှစ် မှ ၄၄ နှစ်အရွယ်ကြား ရှိကြကြောင်း သိရသည်။ ချီကာဂိုရဲတပ်ဖွဲ့က ယင်းပစ်ခတ်မှုမှာ ဂိုဏ်းအုပ်စုဝင်များနှင့်ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း ယူဆထားပြီး လူအရေအတွက်မည်မျှ ပစ်ခတ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သည်ကို ရှင်းရှင်းလင်း မသိရသေးကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုသည်။
“ အခင်းဖြစ်နေရာမှာ သေနတ် ၄ လက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးတွေဟာ ပစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကို ဆက်လုပ်နေပါတယ်။ သူတို့ဟာ အခင်းဖြစ် မျက်မြင်သက်သေတွေနဲ့ ဒဏ်ရာရပြီး ဆေးရုံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရသူတွေကို စစ်ဆေးမေးမြန်းနေပါတယ် ၊ နောက်ထပ် သက်သေခံပစ္စည်းတွေ ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာတွေ ထပ်ရလာဖို့ရှိပါတယ်”ဟု မတ် ၁၄ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ချီကာဂိုမြို့တော် ရဲမှူး David Brown က ဆိုသည်။ “ ကျနော်တို့ မတူခြားနားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ဆက်ပြီးလိုက်နေပါတယ်။ အခုချိန်မှာ အတည်ပြုလို့တော့မရသေးပါဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ကနဦးအစီရင်ခံချက်အရ အဆောက်အဦအပြင်ဘက်တွင် သေနတ်တစ်လက် နှင့် အတွင်းဘက်တွင် သေနတ် သုံးလက် တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ပြင် အဆောက်အဦထဲတွင် ကျည်ခွံများ နှင့် ကျည်ဆံများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
ချီကာဂိုခရိုင်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲ Juan Hernandez က အပစ်ခံရသူအရေအတွက်မှာ ဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော အချို့သူများမှာ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ယင်းအဆောက်အဦဧရိယာမှ ထွက်ခွာ၍ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ဆေးရုံသို့သွားရောက်ခဲ့ကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်ပိုင်းအထိ ဖမ်းဆီးခံရမှုများ မရှိသေးကြောင်း ဒေသတွင်း သတင်းစာက ဆိုသည်။ (Xinhua)
At least 15 shot,2dead in "gang-related" shooting in Chicago
Chicago Fire Department District Chief Juan Hernandez expected the total number of people shot could grow.
CHICAGO, March 14 (Xinhua) -- At least 15 people were shot, and two of them killed, ina"pop-up party" atabusiness on the South Side of Chicago on early Sunday morning.
The shooting happened at 4:40 a.m. A 31-year-old woman, who was shot three times including once in the head, was found dead outside the building; anda39-year-old man, with gunshot wounds to his neck and leg, was later found dead insideabackroom in the business that operates asatow company but also serves as an event space for pop-up parties, Chicago Tribune reported on Sunday.
Chicago police believe the shooting was gang-related. It wasn't clear how many people opened fire, the police said.
"Four guns were recovered at the scene. Our detectives are continuing to do their preliminary investigation and their interviews but several of the witnesses who were wounded are still in surgery and have yet to be interviewed, so more to come as far as any kind of motive or any additional evidence," Chicago police Superintendent David Brown said atapress conference Sunday morning. "We are following up on several different leads that we are yet unable to confirm."
According to the preliminary police report, one of those weapons was found outside the business and three others were found inside. The report said several shell casings and fired bullets were recovered from inside.
Chicago Fire Department District Chief Juan Hernandez expected the total number of people shot could grow, as some people who may have left the business show up at area hospitals on their own later in the day.No arrests had been made Sunday morning, the local newspaper said.
(1) The screengrab taken from the web stream of WGN9, an independent television station licensed to Chicago, shows the police working on the scene, where at least 15 (2)people were shot, with two of them killed, ataparty in the Greater Grand Crossing neighborhood of Chicago, Illinois, the United States, on March 14, 2021. (Xinhua)
The screengrab taken from the web stream of WGN9, an independent television station licensed to Chicago, shows the police working on the scene, where at least 15 people were shot, with two of them killed, ataparty in the Greater Grand Crossing neighborhood of Chicago, Illinois, the United States, on March 14, 2021. (Xinhua)
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံထုတ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး တတိယအသုတ် လက်ခံရရှိ
မက္ကဆီကို ၊ မတ် ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ဆေးဝါးကုမ္ပဏီ ဖြစ်သည့် Sinovac မှ ထုတ်လုပ်သော COVID-19 ကာကွယ်ဆေး တတိယအသုတ်သည် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ မက္ကစီကိုစီးတီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ မတ် ၁၃ ရက်တွင် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အမေရိကန် အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့အား ဝါရှင်တန်တွင် (၂)လကြာ စခန်းချရန် ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ် ခွင့်ပြု
ပေကျင်း၊ မတ် ၁၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ရင်ဆိုင်ရန်အတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံ မြို့တော် ဝါရှင်တန်တွင် အမျိုးသားအစောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင် (၂,၃၀၀)အား ဆက်လက်နေရာချထားရန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lloyd Austinကခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြီးခဲ့သည့် ရက်များတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဝါရှင်တန်၊မတ် ၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အမေရိကန်နိုင်ငံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်၏ အစိုးရအဖွဲ့သည် ယခင်သမ္မတ(ဟောင်း) ဒေါ်နယ်ထရမ့်လက်ထက်က အမေရိကန်-မက္ကဆီကို နယ်စပ်တွင် ကွဲကွာနေကြရသော ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏ မိသားစုဝင်များကို အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း ပြန်လည်ပေါင်းစည်းခွင့်ရရှိစေရန် ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အမိမြေလုံခြုံရေးဝန်ကြီး Alejandro Mayorkas က မတ် ၁ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် အမေရိကန်နိုင် လွှတ်တော်အဆောက်အဦထဲသို့ အကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သည်ဟု သံသယရှိသူများအား တရားစွဲဆိုထားရာ လူပေါင်း (၃၀၀)ကျော်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အနက် အနည်းဆုံး လူ(၂၈၀)ကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်း အမေရိကန် တရားရေးဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုခဲ့သည်။